Chelsea: Ciyaartoy La Gowracay Iyo Murugo Ruxaysa Quluubta Inta Ka Badbaaday
HomeWararka MaantaChelsea: Ciyaartoy La Gowracay Iyo Murugo Ruxaysa Quluubta Inta Ka Badbaaday
Xuska maalmaha xun taariikhda ayey ugu qoran tahay, maanta oo kalena sannad walba waa maalin murugo, waxaanay u baroortaan ciyaaryahan lagu magacaabi jiray Robert Isaac oo lagu ag gowracay garoonka wakhti ay kooxdiisu la ciyaaraysay naadiga Millwall oo ka dhisan heerka labaad ee waddanka Ingiriiska.
Maalintan murugada leh oo laga joogo 32 sannadood, ayaa waxa ku naf waayey dad badan oo uu ka mid yahay Isaac oo ay da’diisu ahayd 18 jir maalintii uu ku naf-waayey midnida ay ku weerareen rabshad sameeyeyaal u yimid garoonka inay nafta ka jaraan ciyaartooyo si xusuusta Chelsea ay maalmo madow ugu sameeyaan.
Isaac oo sannadkii 1984-kii loo doortay ciyaartoyga ugu wanaagsan da’yarta ka ciyaarta waddanka Ingiriiska ayaa isla sannadkaas naftiisa waayey.
October 9, 1984-kii ayey Chelsea u safartay kooxda ay isku magaalada London ka dhisan yihiin ee Millwall oo ay isku haleeleen Den ciyaar ka tirsanayd is-aragga labaad ee League Cup, taas oo kulankoodii hore uu ku dhamaaday rabshad lagu xidhxidhay dad ay tiradoodu ahayd 48 qof. Booliska ayaa kulanka labaad ka cabsi qabay inay rabshado kale dhaceen, sidii ayaanay noqotay oo waxa garoonka soo buuxiyey dad gadoodsan. Booliska ayaa si ay u xakameeyaan, waxa taageereyaasha Millwall lagu khasbay in midabka tigidhadoodu noqdaan midabka buluugga, halka Chelsea looga dhigay casaan.
Isaac ayaa ka mid ahaa ciyaartoyga Chelsea, maalintaas muu ciyaarin, waxaanu fadhiyey dusha sare oo uu ka daawanayey, markii uu garoonka ka baxayna waxa jidka u galay koox ka tirsan rabshadleyaasha Millwall oo mindi la galay.
Inter Milan vs AS Roma – 1-1 – Full Highlights Serie A
Suare Oo Karbaashay Guangzhou Evergrande, Una Diray Barca Finalka FIFA Club World Cup
Khilaaf Diineed Oo Arda Turan Ka Dhex Bilaabay Kubadda Wadanka Turkey
09/09/2015 Abdiwahab Ahmed